Amazeze emakati | Amakati kaNoti
UMonica sanchez | | Izifo, Tricks
Kuwo wonke ama-parasites angakhathaza kakhulu amakati ethu, ngokungangabazeki yiwo amazenze. Lezi zitha ezincane zezinja zethu ezinoboya zizala kalula futhi ngokushesha okukhulu, ngakho-ke uma zingalawulwa ngesikhathi, singaba nesifo, hhayi kuphela esilwaneni, kepha nasekhaya.
Ngenxa yekati lakho, nangokwakho, enye yezinto okufanele yenziwe, ikakhulukazi ezinyangeni ezifudumele, uyikhiphe izikelemu ukufaka ipayipi noma isibulali zinambuzane ukuyivikela. Futhi ukuthi amazeze emakati angasidalela izinkinga eziningi esingaxazulula ngazo ngamaqhinga engizokunikeza wona kulo mhlahlandlela. Yini enye, uzofunda ukwenza izinambuzane zemvelo, ezoba wusizo olukhulu uma uboya bakho bungezwani namaphayiphi kanye nezifutho zamakhemikhali.
1 Kuyini ukuzuza?
1.2 Umjikelezo wokuphila
2 Izifo ezingazibanga
3 Ngingazi kanjani ukuthi ikati lami linamazeze?
4 Ukuvikelwa Kwamakhefu Emakati
4.1 Amakhemikhali okubulala izinambuzane ukulwa namazeze emakati
4.1.4 Isifutho se-Antiparasitic
4.2 Izinambuzane zemvelo
4.2.1 Amakhambi asekhaya wamazeze emakati
4.2.1.2 Imvubelo kabhiya
4.2.1.3 Isihlahla setiye amafutha abalulekile
5 Okuhlangenwe nakho kwami
Ukulwa kangcono nalesi sifo, kunconywa kakhulu ukuthi usazi kahle. Ngale ndlela kuzoba lula ngathi ukuthola amaphuzu ayo abuthakathaka, futhi singaqhubeka nokwenza izindlela zokuvikela ikati lethu ngesikhathi esifanelekile. Lapho sengikushilo lokho, Ngabe siyazi ngempela ukuthi iyini intakumba?
Amazeze izinambuzane ezincane (ezingaba ngu-3mm ubude), ngaphandle kwamaphiko, ezinga-oda le-Siphonaptera. Zondla ngegazi lezilwane ezincelisayo ngomshini womlomo owenzelwe ukumunca igazi lezilwane eziziphethe, futhi sengathi lokho bekunganele, cishe izinhlobo eziyizi-2000 XNUMX ziyaziwa emhlabeni jikelele. Ukwengeza ukuhlambalaza ukulimala, ezinye zazo zidlulisa izifo ezesabekayo njengesifo se-bubonic, typhus noma tapeworm. Anombala omnyama, ngokwesibonelo lawo ahlupha amakati abomvu ngokubomvu.
Imilenze yaso mide, ilungele ukwenza ukweqa okukhulu (kufika ku-34cm ohlangothini oluvundlile, kanye no-18cm ohlangothini oluqondile). Kungaleso sikhathi, isilwane esikwazi ukuhamba isikhathi eside kakhulu eqa linye maqondana nosayizi waso. Futhi njengoba umzimba wayo ucindezelwe eceleni, ingahamba ingabonakali ngoboya bomphathi.
Amazeze izinambuzane umjikelezo wazo wempilo uyehluka, futhi kukhiqiza kakhulu. Ukusuka lapho engamaqanda aye ebudaleni, kungathatha amasonto amabili phakathi nezinyanga ezifudumele, kuze kufike ezinyangeni eziyisishiyagalombili uma isimo sezulu sibanda. Abesifazane babeka amaqanda angama-20 ngendlela emangalisayo ngosuku ngalunye ngemuva kokondla; empilweni yakhe yonke uzobe ehlanganise cishe ama-600.
Ngenkathi ziyizibungu, azibangeli ukungaphatheki kahlenjengoba zingamunci igazi. Bondla kuphela ngoboya obufile nesikhumba, indle yabantu abadala, nenye imfucumfucu. Kepha ezinsukwini ezimbalwa zizoba iziphungumangathi, futhi zizovikeleka emifeceni yazo ngenkathi zifinyelela esigabeni sabantu abadala ngezinsuku eziyi-14 kuphela uma isimo sezulu sihle; uma kungenjalo, okungukuthi, uma kusebusika futhi amazinga okushisa ahlala ngaphansi kuka-10ºC, bazoyisebenzisa njengezibungu noma iziphungumangathi, futhi entwasahlobo bazoqeda ukukhula.
Amazeze awavamisile ukubanga ukucasula okungaphezu kokwesabekayo kuzivakashi, kepha kufanele kubhekwe ukuthi zingadlulisa izifo, ezinje isifo se-bubonic noma i typhus. Ikati zigcwele, ogama lakhe ngokwesayensi I-Ctenocephalides felisNgaphezu kwalokho, ingahambisa ifayela le- kwadingeka.
Futhi kungadala ukungajabuli okungaphezu kokukodwa kubangani bethu. Izifo ezingadluliselwa ngamazeze emakati yizi:
I-Filariasis: zingama-nematode athelela izicubu ezingaphansi kwenhliziyo; empeleni yaziwa ngegama 'lesifo senhliziyo'. Izimpawu yilezi: ukukhwehlela okungapheli, inkinga yokuphefumula kahle, ukungathandi ukudla, nokungabi nalutho. Uma ungelashwa ngesikhathi, kuzofanele ungenelele.
I-hemoplasmosis: amagciwane athinta uhlelo lwemithambo yegazi. Amakati athelelekile azophela amandla, anciphise isisindo, abe nomkhuhlane, kanti ezimweni ezimbi kakhulu angaba ne-anorexia.
I-Dipylidiosis: yigciwane lesisu elaziwa ngokuthi yi-tapeworm. Ihlala emathunjini ekati bese idla lokho ekungenisayo. Azikho izimpawu ezibalulekile, ngaphandle kokulunywa indunu okuyokuphoqa ukuthi uhlale phansi bese ukhasa phansi.
I-Flea Bite Allergic Dermatitis (DAPP): Yisifo esibi kakhulu kulezi ezine, kodwa esivame kakhulu. Ukusabela kwenzeka lapho izenze limunca igazi lekati, elizoqala ukulunywa bese indawo ethintekile ishiswa, ibomvu ngombala. Ngaphezu kwalokho, uzobona ukuthi ikhotha kanjani kaningi nokuklwebheka uzama ukukhulula ukulunywa. Lapho inesifo esithuthukile, sizobona ukuthi kunezindawo ezingenaboya emzimbeni wesilwane.
Ngingazi kanjani ukuthi ikati lami linamazeze?
Ikati elinamazeze lizophenduka isilwane esingaxakeka, singaphumuli, futhi sibe nolaka lapho ukutheleleka sekuthuthuke kakhulu. Kepha uphawu lokuqala oluzositshela ukuthi lunalo yilolo uzochitha isikhathi ukunwaya. Ungakwenza ngamandla amakhulu, okungadala ukulimala ngezikhathi ezithile endaweni ethintekile.
Indlela ephumelelayo futhi esheshayo yokwazi ukuthi inayo yini ngokudlulisa ikama ngokuphakamisa izinwele zalo. Uma ubona amachashazi amnyama akhazimulayo emhlane wakhe, ngemuva kwezindlebe zakhe, ezansi komsila wakhe noma esiswini sakhe, lapho-ke ngeke kube khona okunye abangakwenza ngaphandle kokumsusa umbungu.
Ukuvikelwa Kwamakhefu Emakati
Njengoba kungekho muntu ofuna ukuba namazeze ekhaya lakhe nokuthi ikati lakhe akudingeki libahluphe, okungcono kakhulu esingakwenza ukuwavimba. Kanjani? Kunezindlela ezimbili: amakhemikhali y imvelo.
Amakhemikhali okubulala izinambuzane ukulwa namazeze emakati
Ezitolo zezilwane nasemitholampilo yezilwane uzothola ukudayiswa ama-antiparasitic pipettes, amakhola, amaphilisi kanye nezifafazi. Ngayinye inezinzuzo zayo kanye nezingqinamba zayo, ngakho-ke sizokubona ngokuningiliziwe ngokuhlukile:
Kulula kakhulu ukufaka isicelo, inqobo nje uma ikati lingesabi 🙂. Isilwane sibanjwa ngokucophelela kodwa ngokuqinile, izinwele zihlukaniswe nentamo (ngemuva), futhi umkhiqizo uyasetshenziswa. Zinokusebenza kwenyanga eyodwa, futhi iqiniso yilokho ziwusizo olukhulu, ikakhulukazi uma uphumela ngaphandle.
Nokho, qaphela kakhulu ukuthi ungayibeki endaweni lapho ingafinyelelwa khona, ngoba uma kungenjalo ungadakwa.
Ama-collars ashibhile kunamaphayiphi, futhi kunconywa kakhulu lapho sifuna ukuqiniseka ukuthi ikati lethu ngeke libambe noma nini njalo lapho liphuma liya kuvulandi. Zisebenza futhi inyanga eyodwa, ngakho-ke okungenani amasonto ama-4 singazola.
Inkinga izovela uma siyidedela ngaphandle. Izikhathi eziningi le migexo ayinayo i-clasp yokuphepha, futhi uma uthola ukuxhuma ... Ngingaba nezinkinga eziningi. Ngakho-ke uma uyidedela, qiniseka ukuthi uthenga umgexo ngalolu hlobo lwe-clasp.
Amaphilisi asetshenziswa kabanzi 'njengecebo lokugcina'. Lapho ukwanda kwamakhemikhali kubalulekile, noma uma uvame ukuba nokuningi, amaphilisi azokusiza uphile impilo enokuthula, ngaphandle kokukhathazeka kakhulu ngalezi zinambuzane. Imiphumela yayo ingahlala ezinyangeni ezi-1 kuye kwezi-3 noma ezi-6 kuya ngokuthi uyinika muphi.
Yebo, ungalokothi unikeze umngane wakho eyodwa ngaphandle kwemvume kadokotela wezilwane wakhonjengoba kungadala ukusabela okweqile futhi kusongele impilo.
Isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokuchamisela izikhukhukazi, ezindlini zezilwane nakubavikeli ngokusebenza kahle kwayo nangezindleko eziphansi. Kuyindlela enhle kakhulu lapho sifuna ukonga imali encane, futhi sigcine ikati ligcwele mahhala.
Kepha ... (konke kune-a), qaphela kakhulu amehlo, impumulo, umlomo nezindlebeNgaphandle kwalokho kuzofanele simuse kudokotela wezilwane ukuze amhlole.
Isikhathi esithile manje, kuya ngokuya kujwayelekile ukuthola izinambuzane zemvelo ezingabangeli inkinga esilwaneni. Imigexo, amapayipi, izifutho ... ezinikezwa ngendlela efanayo namakhemikhali, kepha zehluka kuzo ngokuba zemvelo, okungukuthi, Noma ikati lakho likhotha olunye uketshezi kupayipi elingokwemvelo, akukho okuzokwenzeka kuye.
Ziyindlela engcono kakhulu yamakati anezinto ezibangelwa ukungezwani komzimba, kanye nalabo abahlala ekhaya usuku lonke. Izithiyo kuphela ukuthi ukusebenza kwayo kuhlala kancane, ngakho-ke ukwelashwa kufanele kuphindwe kaningi (ngokujwayelekile, kanye njalo ezinsukwini eziyi-15), nokuthi uma uboya buphumela ngaphandle ngokuvamile abusizi kakhulu. Kepha zingabizi kakhulu, futhi iqiniso ukuthi zikufanele ukuzama.
Noma kunjalo, uma ungafuni ukusebenzisa imali futhi ukhetha ukwenza izinambuzane zakho zemvelo ekhaya, lapha unezindlela zokwelapha ezihlukene.
Amakhambi asekhaya wamazeze emakati
Lezi zinambuzane azilithandi neze iphunga likalamula. Sika ulamula ube izingcezu bese uwaletha ngamathumba ebhodweni. Bayeke bahlale ubusuku bonke futhi, ngosuku olulandelayo, bageze ikati lakho ngendwangu noma isiponji.
Ucebile ngovithamini B1, izogcina amazeze kude nekati lakho. Faka isipuni esincane bese usixuba nokudla kwakho okujwayelekile nsuku zonke, futhi ungavalelisa kulezi zinambuzane eziwuhlupho unomphela.
Isihlahla setiye amafutha abalulekile
Ingelinye lamakhambi emvelo asebenza kakhulu emelene namazeze emakati, futhi kulula ukuwasebenzisa. Thola isifutho sikawoyela wetiye, futhi kuzofanele ufafaze ikati lakho ngokugwema ukuthintana namehlo, ikhala, umlomo nezindlebe.
Ubuwazi ukuthi itiye le-chamomile lixosha amazeze? Akunjalo? Yenza ukumnika futhi, lapho nje amanzi efudumele, thambisa isiponji noma indwangu kuso bese usula emzimbeni wesilwane.
Okuhlangenwe nakho kwami
Amazeze yizinambuzane okufanele ngibhekane nazo unyaka nonyaka. Akufanele ngivikele kuphela amakati ami kuphela, kepha nezinja zami. Ngikhumbula unyaka owodwa, ngo-2010 noma ngaphezulu, saba nesifo esiwumshayabhuqe ekhaya. Kwakungesinye sezimo ezimbi kakhulu empilweni yami. Bekufanele siwashe wonke amashidi, izindwangu zetafula, izingubo…, sikhuhle phansi isibulala-zinambuzane nsuku zonke. Noma kunjalo, ngenhlanhla sasingekho isidingo sokubiza insizakalo yokulawulwa kwezinambuzane, kepha amapayipi engangiwafaka emakati ayengasebenzi kahle ngaleso sikhathi.
Kule vidiyo uzokwazi ukuthi ungawaqeda kanjani amafuza angaba sekhaya usebenzisa amakhambi asekhaya:
Angikwazi ukusho ukuthi imishanguzo yokubulala izinambuzane yemvelo noma yamakhemikhali ingcono yini ekulweni namazeze emakati. Kuya kakhulu ngokuthi isilwane sihlala kuphi nokuthi sivunyelwe ukuphuma ngaphandle noma cha. Endabeni yami, akukho okunye ebengingakwenza ngaphandle kokubeka amapayipi amakhemikhali kuwo, ngoba lapho ephumela ngaphandle, awemvelo awabasizi kangako lapho besensimini. Kepha uma ubomvu bakho buzohlala busekhaya, iseluleko sami yilokho kwenze kube ngokwemveloNgale ndlela, uzokugwema ukuzibeka engcupheni ngokungadingekile.
Kungakhathalekile ukuthi yimuphi umkhiqizo owukhethayo, kubalulekile ukuthi buza udokotela wezilwane ukuthola iseluleko ngoba uyawazi umlando weklinikhi wekati lakho futhi uzokwazi ukukutshela ukuthi iyiphi ezomfanelekela kakhulu.
Akekho ofuna ukubona amazeze emakati, kepha asinakho okunye esingakwenza ngaphandle kwalokho sithwale okungcono kakhulu esingakwenza, kungaba ngamakhemikhali okubulala izinambuzane, noma ukulungiselela amakhambi ethu ekhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Izifo » Amazeze emakati
Ngiyabathanda owami cishe uneminyaka emibili ubudala. Ngibeke i-flea shampoo kanye ne-flea spray.Nginayo eyodwa akazivumeli ukuthi ageze.Ngimnika i-meox mix of food.
Ungazi kanjani ukuthi ikati lami line-parvovirus
Ngabe ucabanga ukuthi wazi konke ngamakati amnyama? Ake kukumangaze